Mapisarema 135 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
135 Rumbidzai Jah!* Rumbidzai zita raJehovha;Murumbidzei, imi vashumiri vaJehovha,+ 2 Imi makamira muimba yaJehovha,Muzvivanze zveimba yaMwari wedu.+ 3 Rumbidzai Jah, nekuti Jehovha akanaka.+ Imbai muchirumbidza zita rake, nekuti rinofadza. 4 Nekuti Jah akazvisarudzira Jakobho,Israeri kuti ave pfuma yake yaanokoshesa.+ 5 Nekuti ndinonyatsoziva kuti Jehovha mukuru;Ishe wedu mukuru kupfuura vamwe vanamwari vese.+ 6 Jehovha anoita zvese zvaanenge achida kuita+Kudenga nepanyika, mumakungwa nemumvura yese yakadzika. 7 Anoita kuti makore asimuke* kubva kumigumo yenyika;Anoita kuti mvura yekunaya ive nemheni;*Anobudisa mhepo mumatura ake.+ 8 Akarova matangwe eIjipiti,Vanhu zvese nemhuka.+ 9 Akatuma zviratidzo nezvishamiso pakati pako, iwe Ijipiti,+Pana Farao nepavashandi vake vese.+ 10 Akaparadza marudzi akawanda+Uye akauraya madzimambo aiva nesimba,+ 11 Sihoni mambo wevaAmori,+Ogi mambo weBhashani,+Neumambo hwese hweKenani. 12 Akapa nyika yavo kuti ive nhaka,Nhaka yevanhu vake vaIsraeri.+ 13 Haiwa Jehovha, zita renyu rinogara nekusingaperi. Haiwa Jehovha, mukurumbira wenyu unogara* kwezvizvarwa zvese.+ 14 Nekuti Jehovha achadzivirira vanhu vake,*+Uye achanzwira tsitsi vashumiri vake.*+ 15 Zvidhori zvemamwe marudzi isirivha negoridhe,Basa remaoko emunhu.+ 16 Zvine muromo, asi hazvitauri;+Zvine maziso, asi hazvioni; 17 Zvine nzeve, asi hazvinzwi. Hazvina mweya wekufema mumuromo mazvo.+ 18 Vanhu vanozvigadzira vachafanana nazvo,+Uye ndizvo zvichaitawo vese vanovimba nazvo.+ 19 Imi imba yaIsraeri, rumbidzai Jehovha. Imi imba yaAroni, rumbidzai Jehovha. 20 Imi imba yaRevhi, rumbidzai Jehovha.+ Imi vanotya Jehovha, rumbidzai Jehovha. 21 Jehovha ngaarumbidzwe muZiyoni,+Iye anogara muJerusarema.+ Rumbidzai Jah!+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Anoitira mvura inonaya pekubuda napo.”
^ Kana kuti “zita renyu rinogara.” ChiHeb., “chiyeuchidzo chenyu.”
^ Kana kuti “achamiririra nyaya dzevanhu vake.”
^ Kana kuti “achazvidemba pamusoro pevashumiri vake.”